Faysal Rooble: “Abiy Axmed dagaal adag … oo yasid ah buu Soomaalida ku wadaa iyo dhulboob … Mustafe Cumar asna wuxuu aaminsanyahay in dhul badan aysan Soomaalidu lahayn” (dhegayso) – Radio Daljir
Faysal Rooble: “Abiy Axmed dagaal adag … oo yasid ah buu Soomaalida ku wadaa iyo dhulboob … Mustafe Cumar asna wuxuu aaminsanyahay in dhul badan aysan Soomaalidu lahayn” (dhegayso)
Febraayo 7, 2019 7:37 g 0
Raysal Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo dhowaan magacaabay guddiga xallinta khilaafaadka xudduudaha iyo dib-u-heshiisiinta ee dalka ayaa 41 xubnood oo gudigaas ka kooban yahay Soomaalida ka siiyey 1 xubin oo keliya, halka Tigreega laga siiyey 12 xubnood.
Xubinta Soomaalida la siiyey waa gabadh dhalinyaro ah oo hooyadeed Oromo tahay taas oo aan wax badan kala socon khilaafaadka Soomaalida iyo Oromada, arrimaha xuduudka iyo qaddiyadaha la isku hayo.
Xubnaha guddigaas ee dhanka diimaha waxa uu RW Abiy ku soo daray baadariyaasha madaahibta Kiristaanka oo dhan, halka Culimada Soomaalida aan waxba lagaga darin oo doorkii Islaamka la siiyey wadaaddo oromo ah.
Arrintan ayaa la leeyahay in looga goleeyahay in dhulka lagu muransan yahay Oromadu qaadato maadaama aan Soomaalidu miiska wada hadalka iyo dib-u-heshiisiinta joogin.
Dawlad deegaanka Soomaalida iyo Madaxweyne Cagjar ayaa iyagu ka aamusan arrimahaan, waxaana shaki laga muujiyey waxa uu Madaxweyne Mustafe Cagjar ka aamisanyahay dhulka lagu muransan yahay.
Aqoonyahan Faysal Rooble oo ah qoraa ka faallooda siyaasada Geeska Afrika ayaa Radio Daljir arrimahaasi uga warramay.
Dowladda Deegaanka Soomaalida 379 Siyaasadda & Dhaqaalaha 513 Wararka 28793